बलि विरोधीहरुले “शिकार” अजिङ्गरले जस्तै ज्युँदै सर्लक्क निल्छन र ? « Swadesh Nepal
बलि विरोधीहरुले “शिकार” अजिङ्गरले जस्तै ज्युँदै सर्लक्क निल्छन र ?
जनकमान डंगोल – सियो बनेर पस्ने अनि फाली बनेर निस्किने जिनिसलाई मसि भनेर न्वारानेको छ । मसि भनेको फेरी लेख्ने मसि भनेर बुझ्नु होला । मसिह अर्थात प्रभु येसुलाई छोटकरीमा मसि अझ ढंग पुर्याएर बोल्न नजान्नेले त मुसी पनि भन्छन । जसी मसिह भन्नु पर्नेमा जय मुसी भन्छन । आफ्नो भाका भे पो सद्धे बोल्थे । ईम्पोर्ट भएर आको पर्यो त्यहि भएर शुद्ध बोल्न नजानेर त्यस्तो बोलेका हुन ।
नेपालमा मसिको भक्ते क्यापूचिन पादरी मल्ल राजाको पालामा छिरेका हुन । मल्लराजा लाई ह्याप्पी ह्याप्पी बनाएर यतै कान्तिपुर खाल्डोमा बासको जोहो गरे । मसिका नाईकेलाई नेवारी भाषा सिकाउने पनि नेवार ब्राम्हण बालगोबिन्द थिए । तिनै नेवार बाजेले क्यापुचिन पादरीलाई नेवारी भाषामा प्रभुको प्रसस्ती लेखाउन सघाए । गोर्खाली देखि कोर्काली सम्मले नामै नसुनेको भाका सुन्न पाए । हे प्रभो भन्थे ओ गड भन्न सिकाए । उति बेलै जिरो बाट शुरु गरेर दश हुँदै झन्डै सय भन्दा माथिलाई आफ्ना भक्ते बनाउन भ्याए । हेर्नुस तस्बिर:
मल्ल राजाको शासन पिलित्त पारेर पृथ्बीनारायण शाह काठमाण्डौ खाल्डोमा छिरे र खाल्डोको तिनै राज्य आफ्नो कब्जामा पार्न साथ मसिहरुको दुर्दिन शुरु भो । निकालाबास हुन बाध्य भए । त्यतिखेर निकालाबासमा परेका मसिका भक्तेहरु संगै नेपाले मसि बनेकाहरु भारतको बेतियामा घरजम गर्न गए । बेतियाको एउटा गाउँनै नेपाले मसि गाउँ बन्न पुग्यो । बिस्वास नलागे हेर्न गए हुन्छ । त्यै रिसले मसीको बिदेसी नाईकेले पृथ्बीनारायण शाहले किर्तिपुरको लडाईमा ३ धार्नी बराबरको नाक कान काटे भनेर हल्ला फैलाए । अहिले पनि काम नपाएको बेलामा मसिका भक्ते आंग्काजीहरुको समुहले थोत्रो हल्लाको बेसुरे राग अलाप्ने देखि थुक्ने दिबश भन्ने चाड मनाउन थालेका छन।
मसिका भक्तेहरुको काम भनेको र्काको धर्म र संस्कृति निमिट्यान्न पार्ने हो । त्यस्ता कामको लागी लालेहरुलाई ठेक्का दिएका छन । लालेहरु भनेका सत्ता र भत्ताको लागी जे पनि गर्न पछी नहट्ने जातका मनुख्यहरु हुन । जनयुद्ध भन्ने हाउगुजी फैलाउनेहरु देखि लाल सलाम भनेर हात मुठी पारेर आकास तिर फर्काउनेहरु त्यसैको पुख्ता प्रमाण हो ।
नेपालमा हज्जारौको संख्यामा INGO भन्ने जिनिस खुलेको छ । जिनिस त्यसै चल्दैन । प्रभु मसिका खाँटी भक्ते भनेका गोरा देखि कुईरेहरुहरु हुन । आफ्नै देशका नागरिकहरु संग १० देखि १३ पर्सेन धार्मिक कर असुलेर नेपाल जस्ता गरिप देशहरुमा विकासे संस्था खोलेका छन त्यसैलाई INGO देखि NGO भनेर भनिन्छ । हेर्दा बिकास गरेको जस्तो देखिने तर भित्रभित्र धमिराले जस्तरी खोक्रो पार्ने काममा लागेका छन । मसिका भक्ते र ति भक्तेहरुको लागी भनेर बनाईएको चर्च नामको जिनिस अहिले लाखौ लाख ठडिनु भनेको नै बिकास हो त ।
नेपाल हिन्दु रास्ट्र हो र करोडौ करोडको संख्यामा हिन्दु ओमकारधारी धर्मालम्बीहरु बस्ने गर्दछन । हिन्दु धर्मलाई कसरी पिलित्त पार्ने भनेर मसिका भक्तेहरुले तारे होटलमा गोष्ठी देखि बैठक बसाल्छन । त्यस्ता गोष्ठीमा भाग लिने देखि गोष्ठी गर्ने जिम्मा समेत हिन्दुको खोल ओढेका लब्धप्रतिष्ठित ब्यक्तिहरुले नै लिएका छन । खाँटी हिन्दुको कोखमा जन्मिने अबसर पाएका तर दुई पैसाको लोभमा आफ्नो अस्मिता बिदेशिको अगाडी बन्दकी राखेर आफ्नै धर्म र संस्कृति बिरुद्द लाग्छन भने बिदेसिले देश खत्तम पार्यो भनेर गोहीको आँसु किन बगाउने ?
जबजब नेपालमा ओमकार परिवाहरुको चाडपर्व सुरु हुन्छ त्यसपछि युद्धस्तरमा बिरोध सुरु हुन्छ । हिजो सम्म मसिहरु मात्र हिन्दु धर्मका बिरुद्धमा लागेको देखिन्थ्यो भने अहिले हिन्दुहरुकै एउटा हाँगो राधेराधे भन्ने हरु समेत बलि प्रथा बन्द गर भन्दै बारा जिल्लाको गढीमाईमा बलि प्रथा बन्द गराउन न्वारान देखिको बल निकालेर कुर्लिन थालेका छन । खाँटी भाकामा भन्ने हो भने नारायण देखि राधे राधे भनेर नसुतुन्जेल मुखमा हरि कृष्ण भजन देखि साई भजन गाउने जत्तिको पापी र छद्मधारी यो ज्यानले आज सम्म देखेको छैन । जिम्दो छउन्जेल कुकर्म र पापी काम गर्नेहरु जोबन ढल्किदै जान थालेसी कोहि राधे राधे कोहि नारायण देखि कोहि ओम साईराम भन्दै प्रभु भजन गाम्नेहरु पनि कुस्त छन ।
यी नेपाली हुन ?
दशै भनेको हिन्दुहरुको खाँटी चाड । खासगरी दशैमा शक्ति पिठहरुमा देबिलाई खुसि पार्ने भनेर पन्चबलि दिने चलन नेपालमा मात्र नभएर छिमेकी हिन्दुस्थानमा पनि छ । राधे राधे भन्नेहरुको हृदयको देउता भगवान श्रीकृष्णले महाभारत पर्व गराउनु भो । महाभारत पर्वमा बिकास भो कि बिनास ? मुन्छी नमारिकन युद्ध हुन्छ ? भगवान श्री कृष्ण आफै अर्जुनका सारथी हैनन ? त्यस्तै भगवान बिष्णुले दैत्यहरुको नाश गर्नु भएकै हो भने । युद्ध नगरिकन लडाई जितिन्छ ? युद्धमा मनुष्य देखि पशुहरु सम्मको बध हुन्छ भने नारायण देखि राधेराधेहरुले पशुबलीको बिरोध किन गरेका ?
पशुबलि गर्न पाईदैन भनेर मसिका भक्तेहरु कुर्लिन्छन । मसिहरु आफैले थ्यांक्स गिभिंग भन्दै पशु पन्छी देखि समुन्द्रमा विचरण गर्ने व्हेलमछली धरिको क्रुरतरिकाले हत्या गर्छन । प्रभुलाई खुसि पर्ने भनेर त्यसो गरेका हुन रे । अनेक थरिका चाडमा मसिलाई धन्यवाद भन्दै रौसि मासु माछा चढाउने गर्छन भने त्यो चै हत्या नभएर पशुपन्छीहरुले प्रभुको नाउँमा आफुलाई बलिदानी दिएका हुन र ?
कुनै माछा माशुको पकवान तयार गर्नलाई पशु वा पन्छी सहिद हुनै पर्छ । रेटेर, सेरेर, छ्प्क्यायेर होस वा करेंटो लाएर जे जस्तो उपाय लाए पनि मर्ने र मार्ने नै हो । नमारे देखि नमरे सम्म मिठा मिठा स्वादिस्ट पकवान पक्कै बन्दैन । के मसिका भक्तेहरुले चै अजिङ्गरले जस्तै गरि सर्लक्क सर्लक्क पशु पन्छी निल्छन र ? हिजो जनयुद्धको नाउँमा नेपाले लाल बुच्चरहरुले पनि सोझा सिधा नेपाली जनताहरुलाई कुट्ने, पिट्ने, रेट्ने, चुट्ने गरेकै हुन । त्यहि कारणले कत्तिको सिउँदो उजाडियो भने कत्ति गर्भे टुहुरा समेत बने तर त्यसो गर्नु हुन्न भनेर मसिका चेला चपेटादेखि राधे राधे नारायण हुँदै ओम साईराम भन्नेहरुले त्यस्तो काम गर्नु हुन्न भनेर किन भनेनन ?
-लेखकका यी निजि विचार हुन् ।